Barcelona oo soo saartay war rasmi ah ee ku saabsan Ousmane Dembélé, kaddib dhaawac soo gaaray – Gool FM
(Spain) 20 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa war rasmi ah ay ku shaacisay website-keeda waxay kaga hadashay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray xiddigeeda Ousmane Dembélé.
Bayaan rasmi ah oo ay soo saartay kooxda reer Catalonia ayaa lagu sheegay in xiddiga reer France uu dhaawac yar ka soo gaaray muruqa lugta bidix, wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaa mudo dhan 5 toddobaad.
24 jirkan ayaa ku qasbanaan doono inuu maqnaado dhowr kulan oo La Liga ah, oo ay kujiraan seddexda soo socota, iyadoo la filayo inuu soo laabto kulankooda 5-aad ee horyaalka ay kula ciyaari doonaan kooxda Granada.
Ousmane Dembélé ayaa ku biiray liiska xiddigaha dhawaaca kaga maqan kooxda Barcelona sida Lionel Messi iyo Luis Suarez oo iyagana ku maqan dhaawacyo kala duwan.
Si kastabaha noqotee, Barcelona waxay la kulmi doontaa dhibaatooyin waaweyn kulanka soo socda ee Real Betis, haddii uusan soo laabanin kabtankeeda Lionel Messi.
Juventus oo war rasmi ah ka soo saartay xaalada caafimaad ee tababare Maurizio Sarri